६७ बर्षीय अनुप जलौटाको विवाह ३० बर्षीया आफ्नै शिष्यासँग ? « Khabarhub
६७ बर्षीय अनुप जलौटाको विवाह ३० बर्षीया आफ्नै शिष्यासँग ?
भारतीय भजन सम्राट अनूप जलोटा प्राय खबरमा छाइरहन्छन् । यस पटक भने उनी आफ्नी शिष्या अर्थात जसलीन मथारूसंगको विवाहको चर्चाका कारण खबरमा छन् ।
हालै सामाजिक सञ्जालमा अनुप र जसमिनको विवाह पोसाकको फोटो भाइरल बनेको छ । फोटो भाइरल भएसंगै आधुनिक पोसाक र रहनसहनमा रमाउने ३० बर्षिय जसलीन र संस्कारी छबि बनाएका सास्कृतिक पोसाक मात्र लगाउने ६७ बर्षिय अनुपको विवाहको खबरले निकै चर्चामा छ ।
तर विवाहको बिषयमा अनुपले भने खण्डन गरेका छन् । अनुपले जसलीनसंग विवाहको चर्चा झुटो भएको बताएका छन् । उनका अनुसार धोतीकुर्ता लगाएर भक्ति भजन गाउने उनी र आधुनिक पहिरन लगाउने जसलीनको म्याच हुदैन । यसलाई उनको परीवार र नातेदारले उचित मान्दैनन् । त्यसैले उनिहरुबीच विवाह हुने कुनै संभावना छैन । अनुपले जसलीनसंग विवाहका निम्ती आफु ३५ बर्षको भएपनि तयार नरहेको बताए ।
भाइरल फोटोको बिषयमा अनुपले वो मेरी स्टुडेन्ट है नामक फिल्मको रहेको बताएका छन् । जहाँ अनुप जसलीनको पिताका भुमिकामा थिए । अनुप र जसलीनको प्रेमको चर्चा चलेको यो पहिलो पटक भने होइन, बिगबोसमा रहँदा दुबैको चर्चा निकै थियो ।
प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७७, बुधबार ११ : ४३ बजे